Yakanakisa Cyber ​​Muvhuro 2020 inobata muhunyanzvi | Linux Vakapindwa muropa
Yakanakisa Cyber ​​Muvhuro 2020 madhiri
Unofunga kuti uri muvhimi here? Tinokuisa pamuedzo, mweya we Cyber ​​Muvhuro 2020 asvika. Kana iwe usina kukwana paChishanu Chishanu kuti ugutse kushuva kwako zvigadzirwa zvetekinoroji, kana iwe wakanonoka kutengesa, saka heino mukana wechipiri wekutora zvaunoda zvakanyanya.
Usapotsa madhiri akanakisa Cyber ​​Muvhuro, mushure mezuva rino, hauchazowana mabhagige akaita seaya. Nekudaro, kubva ikozvino zvichienda kumberi, zvese zvigadzirwa zvaunoda kuzvitengera iwe, uye zvipo zvaunotengera vako vaunoda paKisimusi ino, hazvichazove nezvideredzwa izvi ...
Bvisa proton shooter yako, ukande musungo, uye usayambuke mwaranzi nevamwe vatengi kuti utenge chibvumirano chako. Hunt pasi ese ma tech gadget iwe aunoda uye chengetedza mari...
Zvigadzirwa zveAmazon zviri kutengeswa neCyber ​​Muvhuro
Izvo zvinopihwa hazvimire, maalarm eiyo mitengo yakaenzana uye ivo vanoda kuti iwe uvhime izvi zvinoenderana. Tora mukana weakanakisisa zvigadzirwa zvetekinoroji iwe zvaunowana pakutengesa:
Samsung Galaxy Tab S7 +: 11% kuderedzwa paCyber ​​Muvhuro, uye chengetedza € 100 pakutenga kweimwe remapiritsi akanakisa pamusika. Iyo ine 12.4 ″ QHD 120Hz skrini, ine resolution ye2800x1752px. Yakanaka yekutarisa multimedia uye zvemitambo zvemukati. Uye zvakare, ine ine simba Qualcomm Snapdragon 865 Plus chip, ine 3.2Ghz core, 3 2.4Ghz cores uye 4 1.8Ghz cores (OctaCore). Izvo zvinowedzerwa neane simba Adreno GPU uye 6GB RAM. Iyo zvakare ine 128GB yemukati yekuchengetedza, inowedzeredzwa kuburikidza ne microSD kadhi. Iyo ine 13MP yekumashure kamera uye 8MP yekumberi kamera, inokwanisa kurekodha 4K vhidhiyo. Vatauri vayo veAKG vanopa ruzha, rwakachena, rwakajeka uye rwemhando yepamusoro, mukuwedzera pakuve kurira kweDolby Atmos Bhatiri rayo i10090mAh kwenguva refu yekuzvimirira kwemaawa, uye nemukana wekukurumidza kuchaja pa45w. Uye kana izvo zvisina kukwana, iyo S-Pen inosanganisirwa mupakeji.
DJI Mavic Mini Combo: imwe yezvakanakisa zvinopihwa muhunyanzvi ne15% dhisikaundi yekuchengetedza 75 €. Iyi Drone ndeyekupedzisira, iine lithiamu bhatiri inokwanisa kusvika makumi matatu emaminitsi ekubhururuka, ine nhambwe yekufambisa inosvika kumakiromita maviri, 30-axis gimbal yekusimba kukuru kwechigadzirwa chekufungidzira, 2MP kamera yemifananidzo uye HD vhidhiyo, uye Fly App inowirirana Android uye iOS. Inosanganisirwa mupakeji iiyo DJI Drone, 3 mabhatiri ekubhururuka, remote control, 12 spare propellers, kamera inodzivirira, 3 microUSB tambo, USB-C mhando mutyairi wekuchaja tambo uye yakanamatira tsvimbo.
Logitech G935: Kana iwe uchida mamwe mahedhifoni akanaka, une izvi zve 49% zvishoma, izvo zvinokutendera iwe kusevha € 95. Aya mahedhifoni akanyatsogadzirirwa mutambo, iine RGB mwenje mwenje. Ivo vanoshandisa isina waya tekinoroji kubatanidza uye kubvisa tambo, vachishandisa 2.4Ghz RF uye nebhatiri rinozogara kusvika maawa gumi nemaviri ekuzvimirira. Ruzha rwemhando yepamusoro, ine 12 Yakakomberedza Ruzha, DTS, 7.1mm Pro-G madhiraivha, maikorofoni yakavakirwa ine mbeveve kugona, uye kuenderana nePC, Xbox, PlayStation uye Nintendo Chinja.
Polar M430: chengetedza zvinodarika € 130 ne 57% kuderedzwa. Iyo inomhanya wachi ine GPS uye sensor kuyera kupomba kwako. Iyo ine multisport mashandiro, kukwanisa kukubatsira iwe munzira dzakasiyana dzaunoita iwe. Iwe unogona kuyera chinhambwe chakafamba, kumhanya, altimetry, mafungiro, Kurara Plus basa rekuongorora mhando yekurara kwako, nezvimwe. Zvese zvinonakidza mune rejista. Inoenderana nePolar Balance.
Fitbit Versa 2: Kana iwe uchida "kupfeka" tekinoroji nemitambo, saka iwe unofanirwa kuziva izvi 46% kupihwa yeCyber ​​Muvhuro. Iyo smartwatch iyo ichakubatsira iwe kuongorora hutano hwako uye kugwinya. Inosanganisira yakasanganiswa Amazon Alexa, kuti ikwanise kudzora nezwi, tarisa nhau, bvunza mibvunzo, set zviyeuchidzo uye maalarm, kudzora smart smart zvishandiso, nezvimwe. Izvo zvakare inokwanisa kuyera moyo wako uye kunaka kwekurara, nezvimwe. Iwe zvakare unogona kuve ne manejimendi yemimhanzi yako iripedyo nekuda kwekudzora kwayo pamitambo yekutamba kubva kuDeezer, Spotify, nezvimwe. Iyo inokwanisa kunyange kuchengeta nekutamba kusvika kumimhanzi mazana matatu pachigadzirwa chidiki pane ruoko rwako. Semazuva ese, iwe uchagashirawo kuziviswa nezve mameseji, maemail, zviyeuchidzo nezveyako ajenda, uye kunyangwe kugona kutumira mhinduro nekukurumidza pasina kushandisa nharembozha yako. Ehezve, iwe unogona zvakare kuona iyo nguva uye huwandu hweako chiitiko chemuviri munguva chaiyo. Zvese zvinowedzeredzwa nebhatiri rakaringana kuti rigare anopfuura mazuva mana.
Samsung Galaxy Tab A: tora mukana weiyo 8% kuderedzwa yeiyi yakachipa yepamusoro piritsi. Iine 8 ″ skrini ine 1280x800px resolution, ine simba Qualcomm Snapdragon 429 SoC, ine 2Ghz quad-core processor, Adreno GPU, 2GB ye RAM, uye 32GB flash kuchengetedza (inogona kuwedzerwa uchishandisa microSD memory kadhi kusvika ku512GB). Iyo ine 8MP yekumashure kamera, 2MP yekumberi kamera, maspika uye maikorofoni. Iine 5100mAh bhatiri kumaawa ekupedzisira ekuzvimiririra. Yayo inoshanda sisitimu, ine kugona kugadzirisa.
Razer Viper eSports Mutambo Mouse Chiedza: Cyber ​​Muvhuro zvakare inounza iwe 39%. Iyo inonakidza yemitambo mbeva, ine yakanakisa dhizaini uye tekinoroji yazvino. Iyo ine sensor iyo inokwanisa kunyoresa macheki pasina zvinokanganisa zvemanyepo. Shanduko dzayo dzakasimba kwazvo, dzakabata kusvika makumi manomwe ezviuru zvemadhora. Iyo mbeva yemaziso, zviripachena, ine kunzwisisika inosvika 70.000.000 dpi (inogadzirirwa inosvika pamatanho mashanu mundangariro yayo yemukati yezviitiko zvakasiyana) uye gadziriso yakajeka ye 16.000%, iyo ichave nebhenefiti yakanaka kana iwe uchikwikwidza mumutambo wako waunofarira yekukupa yakajeka mukana. Uye zvakare, haina kureruka uye ine Razer Speedflex tambo yekushanduka kukuru uye kudhonza kushoma kana uchiita mafambiro, saka hauna zvipingamupinyi ...
Kodak kunyemwerera: 30% kuderedzwa. Iyo inoshamisa inotakurika purinda iyo iwe yaunogona kutora zvakasununguka chero kwaunoda kuti iko iko iko kwekudhinda kwemifananidzo Inoenderana ne2 × 3 yakanamatira-yakatsigirwa bepa, uye neZero Ink tekinoroji. Iyo inosangana kuburikidza neBluetooth isina waya tekinoroji kune yako iOS kana Android chishandiso, kudhinda iyo mifananidzo. Uye zvakare, ine bhatiri inobhadharisa inosvika maawa maviri (makumi mana neshanu), pamwe nemukana wekuchaja kuburikidza ne microUSB tambo (inosanganisirwa).
Yekupedzisira Nzeve Megaboom LE Panther: 19% discounts pane aya asina waya maspika masipika (anonyudzwa kune 1 mita ye30 min pasina kukuvara). Iyo inonakidza yemhando isina waya Bluetooth mutauri, ine yakadzika mabass, kushomeka kwemvura kwedziva / kumahombekombe kana zhizha rasvika, kubatana kwakawanda (kusvika pamasere maseru akasiyana), uye hupenyu hwebhatiri hunosvika maawa makumi maviri. Uye zvakare, ine 8 ​​sound kutenderera kurira, iine simba uye kujekesa kunakidza mapato ako akanakisa (apo denda rinosiya), uye kuchaja ne microUSB.
Razer Ornata V2: Nhema Chishanu inoita kuti utenge keyboard yekutamba ye 27% zvishoma. Chishamiso chehunyanzvi neakauchikwa michina membrane tekinoroji kubva RAZER, kubatanidza yechinyakare kubaya kurira kwechimakanika switch uye kunzwa kweiyo chaiyo yakajairwa keyboard. Iyo ine multifunction vhiri uye inogadziriswa multimedia makiyi ekugona kutamba, kusvetuka, kudzokera kumashure, kumbomira, shandura kupenya uye vhoriyamu, nezvimwe. Iyo inoratidzira Razer Chroma RGB tekinoroji yekuvhenekera iyo khibhodi ine mavara e-LED uye kuratidza ine simba yekuvhenekera mhedzisiro. Iyo ergonomic futi, ine yakapfava, yakapetwa yekugadzirwa yeganda ruoko chinosara. .
HUION Inspiroy Ink H640P: flash offer iyo inongogara kwemaawa mashoma, uye kugona kutenga iyi digitizer piritsi yekudhirowa kweinenge € 33 chete. Piritsi iri rinokutendera kuti uwedzere kudhirowa mifananidzo yako, kuti uzobata navo muzvirongwa zvakaita seGIMP, nezvimwe. Inoenderana neWindows, macOS uye Android, saka unogona kuisanganisa nefoni yako zvakare (ine USB OTG). Iyo ine inoshandira nzvimbo ye6.3 x 3.9 inches yePC, kana 2.46 x 3.94 inches for mobiles. Iine 6 hotkeys inogadziriswa, kurema uremu, kurerukirwa kwekumisikidzwa, uye chinyoreso chisina bhatiri. Nehukuru hwakanyanya uye kutsetseka kwemitsara.
Xiaomi Redmi Ona 9S: iwe unogona kusevha inodarika € 60 neiyi dhisikaundi kubva 27% paCyber ​​Muvhuro. Foni nyowani ine maprimiyamu uye anodhura maficha, ane 6.67 ″ FHD + skrini, DotDisplay, Qualcomm Snapdragon 720G 2.3Ghz SoC, 4GB ye RAM, 64GB yemukati flash, 48MP quad kamera (48 + 8 + 5 + 2MP ine AI) yabatanidzwa , 5020mAh bhatiri ine kuzvitonga kwenguva refu uye 18W inokurumidza kubhadharisa. Iyo zvakare inosanganisira iyo yeminwe yekunzwa, 3.5mm headphone jack, uye nanotechnology yekupfeka kuti iwedzere kupenya kusagadzikana. Ehezve, inouya neOTA-inokwidziridzwa Android (MIUI).
YAGALA Mini Khibhodi: Unoneta here nekunyora neremote yeTV yako? Zvakanaka, tenga iyi remote control keyboard kuti iro risiri dambudziko, uye ne 28% dhisikaundi. Backlit isina waya khibhodi ine 2.4Ghz RF yekubatanidza. Iyi keyboard zvakare inosanganisira iyo yekubata yekushandisa se mbeva kudzora yako Smart TV nekuzara kwakazara uye nekumhanya. Unogona kushandura anosvika mapfumbamwe emamodhi modhi mukuvhenekera kwako. Inoenderana ne Android TV Bhokisi, PC, iPad, Smart TV, Xbox uye HTPC.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Yakanakisa Cyber ​​Muvhuro 2020 madhiri